Nhau - 5 Dzakajairika Girazi Edge Mhando
Zvishongo zvegirazi zvinogona kugamuchira akawanda akasiyana magirazi ekumusoro ekurapa, imwe neimwe inokanganisa kushanda nekuita kwechikamu chakapedzwa. Kugadziridza kunogona kuvandudza chengetedzo, aesthetics, mashandiro, uye hutsanana nepo ichivandudza mamirioni ekutsungirira uye kubatsira kudzivirira kutsemurwa.
Pazasi, isu tichaongorora zvishanu zvakajairika magirazi emicheto mhando uye avo akasarudzika mabhenefiti.
Cheka uye Swipe kana Seamed Edges
Iyo zvakare inonzi seams chengetedzo seams kana swiped micheto, iyi mhando yegirazi edging - mune iro bhandi rejecha rinoshandiswa kujekesa jecha kubva kumipendero yakapinza - inonyanya kushandiswa kuve nechokwadi chekuti chidimbu chakapedzwa chakachengeteka pakubata. Aya maratidziro ekuchinjisa haapi kumeso, akatsetseka akapedzwa kumucheto uye haishandisirwe zvinangwa zvekushongedza; Naizvozvo, nzira iyi yakanakira mashandisiro ayo iwo mupendero wegirazi regirazi risingazoburitswe, segirazi rakaiswa mufuremu remikova yemoto.
Gaya uye Chamfer (Bevel)
Rudzi urwu rwekutenderera runosanganisira kupwanya goridhe micheto kusvika yatsetseka uyezve kumhanya kumusoro uye ezasi micheto pamwe nebhandi kubvisa kupinza nekubvisa machipisi. Iyo inoguma girazi chidimbu chinoratidzira yakatsetseka chamfer kumusoro uye pasi neepanze pevhu pevhu. Inowanikwa nematanho akatwasuka kana akakombama, makomberedzi emipendero anowanzoonekwa pamirazi isina magirazi, senge iwo ari pamakabati emishonga.
Penzura kukuya, kunowanikwa kuburikidza nekushandisa dhayamondi-rakasungwa vhiri rekugaya, rinoshandiswa kugadzira rakatenderedzwa kumucheto uye rinobvumira kune echando, satin, kana matte girazi kupera. "Penzura" inoreva kumucheto radius, iyo yakafanana nepenzura kana C chimiro. Iyi yekugaya inonziwo Semi-Polished Edge.
Penzura yakakwenenzverwa girazi micheto ivhu rakatsetseka, rakapedzwa neinopenya kana inopenya polish, uye inoratidzira zvishoma curve. Iyo yakasarudzika kupedzisa inogadzira penzura kukwesha kwakanakira kune aesthetics-yakanangana nekushandisa. Kunge penzura-yepasi micheto, iyo kumucheto radius yakafanana nepenzura kana C chimiro.
Iyi nzira inosanganisira kucheka mativi egirazi uye wozoapuratesa, zvichikonzera kuoneka kwakapfava uye kupenya kana kupenya. Mazhinji mafekitori akakwenenzverwa anoshandisawo diki ye45 ° kona chamfer kumusoro uye pasi magirazi micheto kubvisa kupinza uye "chatter" iyo inogona zvakare kukwenenzverwa.